C++ ကို ကျနော်လဲစိတ်၀င်စားပါတယ် ... — MYSTERY ZILLION
C++ ကို ကျနော်လဲစိတ်၀င်စားပါတယ် ...
October 2008 edited May 2009 in C++
C++ ကို ကျနော်လဲ စိတ်၀င်စားပါတယ် . အရင်ဆုံး C++ compiler လေးရချင်ပါတယ် . ရှယ်ပေးကြပါအုံးဗျာ . ဖြစ်နိုင်ရင် pre requirement software တွေရောပေါ့ .
phymng wrote: »
Compiler ကတော့ လွယ်ပါတယ်.. Borland လား Turbo လား IDE နဲ့ တွဲပါပြီးသားတွေပေါ့
VC++ 2008.Net ကို သုံးစေချင်ပါတယ်.. :103:
ကို khunmk ရေ
VC++2008.net လေးရှိရင် တင်ပေးပါလားဗျာ။
aungthu wrote: »
သေရချေရဲ့ သူ့ကို မြန်မာက connection နဲ့ upload လုပ်ရမယ်..
Visual Studio 2008 Express Edition ကို ဆွဲနိုင်ပါတယ်..
microsoft က အလကားပေးထားပါတယ်..
ဒါပေမဲ့ ငါ့ညီက C++ beginner ဆိုရင်တော့ Express Edition မသုံးစေလိုပါဘူး။ Express Edition မှာ တစ်ချို့ MSDN တွေ support မလုပ်ပါဘူး။ ဥပမာ (date out နေတဲ့) MFC တို့ ။ service ဆိုင်တွေမှာ DVD တစ်ချပ်မှ ၁၀၀၀ ကျပ်လား ရှိပါတယ်။ express edition မဟုတ်ပါဘူး။ မှားလည်း မဝယ်မိပါစေနဲ့ ။
ဒီပို့စ်ကတော့ ကြာနေပြီ။ နည်းနည်းပြောလို့တော့ရမယ်ထင်တယ်။
C++ compiler ရင်ချင်တယ်ဆိုရင် မေးခွန်းက Windows ပေါ်မှာသုံးဖို့လား၊ Linux ပေါ်မှာ သုံးဖို့လား။
Windows ပေါ်မှာဆိုရင် MinGW တို့ Cgywin တို့ကိုသုံးလို့ရပါတယ်။ အဲဒီနှစ်ခုထဲကတစ်ခုခုကို install ပြီးရင် Eclipse IDE for C/C++ Develpers ကို install ပါ။ Eclipse နဲ့ဆိုရင် လွယ်လွယ်ကူကူ Build & Execute လုပ်လို့ရပါပြီ။ Eclipse Version က 3.4.1 ကိုသုံးပါ။ ခုလက်ရှိ Latest Version ပါ။ Eclipse ကိုမသုံးဘူးဆိုရင်လဲ Notepad++ နဲ့ code တွေရေးပြီး console ထဲမှာ gcc, g++ တို့နဲ့ compile လုပ်လို့ရပါသေးတယ်။
Ubuntu ပေါ်မှာဆိုရင် GEdit ဒါမှမဟုတ် VIM နဲ့ရေး၊ ပြီးရင် Terminal ထဲမှာ GCC, G++ တို့နဲ့ compile လုပ်ပြီး execute လုပ်ရင် တော်တော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်။ Powerful tools တွေပါ။ Linux ပေါ်မှာ IDE အတွက်ဆိုလဲ Eclipse, Geany တို့ Anjuta IDE တိ့ုစသဖြင့်အများကြီးရှိပါသေးတယ်။ ကိုယ့်အကြိုက်ကိုယ်သုံးပေါ့။ Choice ရှိပါတယ်။
အစ်ကိုတို့ရေ..ကျွန်တော်တစ်ခုလောက်ပြောချင်လို့ပါ........C++က console ပိုင်းဖြစ်နေတာဆိုးတယ်ဗျာ..စက်ဝိုင်းတစ်ခုထွက်ဖို့တောင်တော်တော်လေးရှုပ်နေပြီ....အဲဒါလွယ်လွယ်ကူကူနည်းနည်းလေးသိရင်ပြောပါ
အစ်ကိုရေအောက်က link ကိုသွားကြည့်လိုက်နော်...:103::103: